General Chiwenga and The Nyikadzino Prophecy
Home Top Stories General Chiwenga and The Nyikadzino Prophecy
21:19 Top Stories
The day before Constantino Guveya Dominic Nyikadzino Chiwenga’s grandfather died, he called the future general to his bedside and said:
“What I wanted to achieve I could not achieve, but you are going to do it. Iwe ndiwe Nyikadzino. Ndiwe Nyikadzino, zita randakakupa uchiberekwa, you are going to fulfil this destiny.”
Today, not only does the Commander of the Zimbabwe Defence Forces appreciate those oracle-like words, so does the rest of Zimbabwe and — indeed — the whole world.
And with his statement on November 13, 2017, Gen Chiwenga fulfilled the Nyikadzino Prophecy his legendary grandfather made on October 10, 1965. www.sundaymail.co.zw